रक्सी, हाय रक्सी ! यसरी छुटाउनुस लत (उपयाेगकाे जानकारीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
रक्सी, हाय रक्सी ! यसरी छुटाउनुस लत (उपयाेगकाे जानकारीसहित)
काठमाडौं, सुरुका दिनमा मनोरञ्जनका नाममा रक्सीको सामान्य सेवन गरेपनि समयक्रममा यो लतका रुपमा विकास हुन सक्छ । रक्सी खान मन लाग्ने, नखाएपछि चित्त शान्त नहुने समस्या बढ्दै जान्छ ।
रक्सीको लत बढ्दै गएपछि मानिसको मानसिक र सामाजिक व्यवहारमा नै परिवर्तन आउँछ । यसका अन्य गम्भीर असरहरु पनि पर्छन् ।
रक्सि खानेको आयु नखानेको तुलनामा १२ वर्ष कम हुन्छ ।
– रक्सीको बानी लागेकाहरु मध्ये धेरैको दिमाग चाडै सुक्छ ।
–बिर्सने रोग चाडै लाग्छ ।
– रक्सि सेवन गर्ने झण्डै ४० प्रतिशत मानिसलार्य डिप्रेशनको सम्भावना बढी हुन्छ ।
– रक्सि सेवन गर्ने मध्ये झण्ढै १० प्रतिशतले आत्महत्या गर्छन् ।
– रक्सिले कलेजोसहित विभिन्न अँगमा क्यान्सरको जोखिम बढाउछ ।
– रक्सि सेवन गर्नेमा यौन समस्या चाडो देखापर्छ ।
– रक्सिको लतमा फसेकाहरुको पारिवारिक जिवन सुखद नहुन सक्छ ।
– रक्सि सेवनले उच्च रक्तचापको जोखिम बढाउछ ।
– रक्सि सेवनले धुम्रपान तथा सूर्ति सेवनको कुलत बढाउछ ।
कसरी रोक्ने त यो लत ?
एउटा सीमामा बसेर कहिलेकाहिँ रक्सी खाँदा त्यसले नकारात्मक असर
नपार्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर लतकै अवस्थामा पुग्नु भनेको जीवनलाई नै संकटमा पार्नु हो ।
· रक्सी जहिले पनि उचित मापदन्ड भित्र रहेर सेवन गर्ने , साधारणतया महिलाले २–३ युनित प्रति दिन (२०–३० ग्राम)
पुरुषले ३–४ युनित प्रति दिन (३०–४० ग्राम_ तोकिएको छ, जुन, १ युनिट बराबर साधारण तया १० मि.ली. वा ८ देखि १० ग्राम सुद्ध अल्कोहोल हुन्छ ।
अर्थात १–२ पिन्ट बियर (३–५%) लगभग २८४ मिली वा सानो गिलास वाईन (९%) १२५ मिली व्हिस्की हुन्छ ।
· तिर्खा र प्यास मेटाउनको लागि कहिल्य रक्सी सेवन नगर्ने बरु पानी पिउने वा हल्का पेय पदार्थ पिउने ।
· रक्सी खाने बानी छ भने रक्सी को ठाउमा बेला बेला अल्कोहल फ्री पेय पदार्थ सेवन गर्ने जसले बढी मात्रमा रक्सी सेवन बाट रोक्छ,
· अल्कोहलको मात्रा काम हुने पेय पदार्थ सेवन गर्ने
· आफुले सेवन गरेको पेय रक्सी जन्य पदर्थाको हेक्का राखी कम गर्ने कोसिस गर्ने र सके सम्म लिमित बन्दा बढी नपिउने
· एकै चोटी मा सक्ने गरेर नपिउने ,थोरै थोरै मात्रामा पिउने ,रक्सीको गिलास नसकी नथप्ने ,
· रक्सी सेवन गर्नु अगाडि खाने कुरा खाने ।
· गर्भवती अवस्थामा कहिल्यै रक्सी नपिउने ।
· कुनै मेसिन चलाउदा वा सवारी चलाउदा कहिल्यै रक्सी नपिउने
· यदि नियमित रक्सी सेवन गर्ने बानी छ भने हफ्ताको कम्तिमा दुई दिन अल्कोह्ल फ्री पेय पदार्थ सेवन गर्ने । तनाव कम गर्न कहिल्यै रक्सी नपिउने बरु सारिरिक व्याम ,रिलक्सेसन ,अथवा ध्यान आदि गर्ने साथी भाई परिवार सँग बिताउने ।
रक्सीको लत वा नसामा फसिसकेको व्यक्तीको उपचारमा कुनै एक बिधी पर्याप्त नहुने हुनाले र जटिल पनि भएको कारण ,व्यक्तिको व्यबहार परिवर्तन गर्दा समय प्रर्याप्त लाग्न सक्दछ त्यो आहार विहार परिवर्तन होस् या चुरोट , जाड रक्सीको लट छुताउनको नीम्ति । तर पनि यसको लट छुटाउने विभिन्न उपाय हरु छन् जस्ले पुरै रक्सी छुटाउने देखि नियन्त्रित रुपमा सेवन गर्ने सम्म सहयोग गर्छ । सबै भन्दा पहिले रक्सी पिउने व्यक्तिले यसको खराबी आफू र अरुलाई हुन्छ भन्ने ज्ञान हुनु जरुरी छ।
रक्सीको लतबाट छुटकारा पाउन एक्लो प्रयासले प्रर्याप्त नहुनाले सरिरमा कुनै खराबी नहुदै वा कुनै रोगले च्यापी सकेपनि यसबात उम्कन कुनै अस्पताल ,स्वास्थ्य संस्था वा बिबिन्न आचरन ,व्यबहार परिवर्तन गर्ने केन्द्र हरुमा उपचार गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि पहिला स्वास्थ्य संस्थामा वा अस्पतालमा गई चिकित्सकको सल्लाह लिन उपयुक्त हुन्छ ।
ट्याग्स: alcoholic, मदिरा सेवन